China ukuphakama kokukhanya kwe-G012 ukukhanya kwelanga ukukhanya kwelanga kunye nabenzi bezinto ezingenasici kunye nabathengisi | Hangchi
ILyra Solar Bollard Aluminium umgubo ogqunywe kwisiphelo se-satin esingwevu
Ibanga lezentengiso ukukhanya kwelanga
• Ifuna imali eli-10 ukuya kweli-12 phambi kokuba isetyenziswe
Umgangatho ophezulu webhetri ye-P04 yobomi eyakhelweyo
-Izinto ezifanelekileyo zokukhanyisa iindlela kunye neendlela zokuhamba
• Faka umbala
Powdercoat satin ngwevu
4000K (mhlophe opholileyo)
Imilinganiselo. Imveliso ye-lumen engama-350
Ubungakanani bePhaneli yelanga
Ukuqina okuphezulu okungama-36 kwe-LED ye-LiFeP04 ibhetri yeAluminiyam, ipolcarbonate diffuser
Yintoni iLumen? Ngamagama alula, iiLumens ngumlinganiso wenani elipheleleyo lokukhanya okubonakalayo okuvela kwisibane okanye kumthombo wokukhanya. Ukuphakama komgangatho wokukhanya, "b「 ighte 「" isibane siya kuvela.
Ngaba oku kuthelekiswa njani neminye imithombo yokukhanya? Imizekelo eliqhelekileyo Izikhanyiso ezingama-70
Njengohlobo olutsha lwemveliso yokukhanyisa indawo eluhlaza ehlanganisa ukonga umbane, ukhuselo lokusingqongileyo, ukukhanya kunye nokuhombisa, isebenzisa izinto zentsimbi ezingenanto kunye nomthombo wokukhanya we-LED uneempawu zokuqaqamba okuphezulu, oko kuqinisekisa ukuqaqamba okuthile, kwaye kunokuba ngokubanzi esetyenziswa kwiipaki nasezintendelezweni. , IiVillas kunye neendawo zokuhlala ezinesiphelo siphezulu kunye nezinye iindawo ezingenambane, ukunqongophala kombane okanye intambo engathandekiyo ebeka ukukhanya kwewayini.
Uyilo lomzimba wesibane olwahlukileyo luyakwazi ukumelana neemeko zemozulu ezahlukeneyo. Isibane sotshani sinokuyila ubomi ngokubanzi. Yamkela inkqubo yokuhambisa iglasi yokuhambisa okuphezulu. Ubomi bokuyilwa kwazo zonke izixhobo ziyahambelana. Uyilo lokonga amandla olwahlukileyo lwenza ukuba ubomi bebhetri bube bude kunetekhnoloji yesiqhelo amaxesha ama-2- 3.
Yimveliso enevolthi ephantsi, yamkela unikezelo lwamandla ngqo, inezinto ezikhuselekileyo, kwaye inokukhusela ngokufanelekileyo abantwana, abahamba ngeenyawo kunye nezilwanyana.
Ukongeza, ukukhanya kunye nokucima kulawulwa kukukhanya kwelanga kunye nokungeniswa kokukhanya, okungumsebenzi wokulawula ukukhanya, kwaye kukwakhona nendlela yokonga umbane. Kwimeko yabahambi ngeenyawo abaphantsi ebusuku, amandla emveliso yesixhobo sokukhanya ancitshiswa ngokuzenzekelayo ukugcina umbane.
Kuyafaneleka ukulungisa kwiindawo ezininzi
Iphaneli yelanga kubandakanya isivamvo sokukhanya
Izibane ze-Eco Solar
Egqithileyo I-G001 ukukhanya kwelanga ukukhanya kwewaranti iminyaka emi-5
Okulandelayo: SGL07 Series ukukhanya ingca elanga 5W
I-PNG 72M-F-40F sereis iipaneli zelanga kuphela ze-PV s ...